Famakafakana ny LG G5, ny finday modular misy fakan-tsary roa | Androidsis
Izahay dia mamakafaka ny LG G5, ilay finday avo lenta modely misy mombamomba ny sary
Manuel Ramirez | | About us, hevitra
El LG G5 is the telefaona modular voalohany fa matotra amin'ny fanomezana fahaiza-manao hafa ho an'ny mpampiasa. Fakan-tsarimihetsika iray izay nanirian'ilay orinasa Koreana hanintona ny sainy tamin'io fisehoana modular io sy ny mombamomba ny mpaka sary amin'ny alàlan'ny fananana fakan-tsary roa ao aoriana. Ity fakantsary roa ity, ankoatry ny mahazatra, dia manana zoro malalaka izay miasa tsara amin'ny fakana sary ny fianakaviana na ireo toerana ara-batana izay ahazoana ny zoro lehibe indrindra amin'ny sary dia ny fahazoana ny maritrano trano na zavatra rehetra. ny sehatry ny kianja filalaovam-baolina.
LG no orinasa voalohany nandray ny maodely tamim-pahamatorana ary izany no antony ahafahanao mitondra amin'ny LG G5 andian-dahatsoratra amin'izy ireo ahafahanao miditra amin'ny sary tsara kokoa, feo avo lenta kokoa na fihenan'ny bateria feno hanovana azy amin'ny resaka segondra. Ny LG G5 dia izao sahala amin'ny iray amin'ireo finday tsara indrindra eny an-tsena Ary raha afaka nanampy bateria kely kokoa izy io, dia ho telefaona tonga lafatra hampielezana roa miaraka amin'ny fanombohana lehibe hafa amin'ny taona, ny Galaxy S7. Na ahoana na ahoana, ny G5 dia telefaona manokana ho an'ireo mpitia sary sy ho an'ireo izay te hanana ireo modely ireo hanovana azy ho gadget miaraka amina toetra hafa ao anatin'ny segondra.
1 Ny telefaona modular sy ny telefaona zoro malalaka
2 Toe-javatra fototra
2.2 Ny fakantsary roa
5 Ohatra fakan-tsary
5.1 Zoro malalaka
5.3 Sary makro
7 Famerenana horonantsary
9 Ny hevitry ny tonian-dahatsoratra
Ny telefaona modular sy ny telefaona zoro malalaka
Ny LG G5 dia smartphone feno modular ary izany no mahatonga ny orinasa Koreana omena miaraka amin'ny developer SDK mba hahafahan'ny antoko fahatelo hiditra amin'ny tetikadin'izy ireo manokana. Andao lazaina fa nosokafana ny làlana iray, amin'ny volana sy taona ho avy, raha toa ka manohy miloka amin'ny fombam-pahefana i LG, dia hahita filokana mahaliana isika hanolotra fahatsapana sy fiasa hafa amin'ny telefaona iray izay nahasarika ny sainy rehefa naseho tao amin'ny Finday io. Kaongresy manerantany.
Raha ny mpanamboatra Koreana Te ho ivon'ny lahateny maro aho izay nitranga tany Barcelona tamin'ny andron'ny MWC dia nahomby izy. Mbola mila mahafantatra ny ho avy tsy ho ela momba ireo modules ireo sy ny LG Friends izahay, andiana kojakoja izay tonga miaraka amina tanjona mitovy hanampiana traikefa bebe kokoa amin'ny finday avo lenta. Etsy ankilany, manana modules roa isika, ny LG Cam Plus hanomezana endrika tsara kokoa amin'ny sary, ary ny bateria handoa azy tanteraka. Ny LG Friends dia: LG 360 Cam, LG 360 VR ary Hi-Fi Plus miaraka amin'ny B&O Play. Azonao atao ny mamaky ity fidirana ity raha te hahazo vaovao misimisy momba ny tsirairay amin'izy ireo.
Ankoatra ny lafiny maodely, ny toetra iray hafa izay nanaloka ahy indrindra hatramin'ny voalohany dia ny azy 135 degre ny zoro zoro. Ny fananana an'io fahaizana maka ireo karazana sary ireo avy amin'ny fampiononana sy ny fanamorana izay midika hoe ny fakana ny findainao finday segondra, dia zavatra tsy mbola niainako ary ho an'ny niavaka ny G5. Izy io dia zavatra niainana izay tsy misy telefaona hafa eny an-tsena manana solomaso amin'ity karazana ity. Ianao dia afaka mandalo ity fidirana ity amin'ny fiheverana manokana an'io endri-telefaona io.
Ho an'ny sisa amin'ireo endri-javatra, miatrika smartphone iray lehibe izahay tsy manana kapaoty mavesatra toy izany, efijery avo lenta ary famolavolana vy tokana izay mifanaraka amin'ny zava-mitranga ankehitriny miaraka amin'ny Android eo afovoany ambony. Ny fahombiazana azonao avy amin'ny telefaona rehefa mizaha ny birao, ny fampiharana ary ny endri-javatra hafa dia mendri-piderana ary tsy misy azo omena tsiny amin'izany.
Ny lesoka fotsiny hitako dia ny batterie, izay latsaka fohy nefa io tsy dia mijaly firy izy io raha ampiasaina ilay endri-javatra "mandeha foana" ny fananana ny famantaranandro sy ny fampandrenesana hatrany hahitana azy ireo. Fitaovana iray hitantsika amin'ny finday avo lenta kokoa toa ny Galaxy S7 ary ahafahantsika mamonjy ny fihetsika mandeha amin'ny telefaona amin'ny fotoana maro.
Ny LG G5 dia miavaka amin'ny a famolavolana vy feno vatana izay ahitana ny endrik'ireo zorony miolakolaka sy ny boriborin'ny bara izay misy ny masom-borona roa, ny fihorakorahana ary ny sensor amin'ny dian-tànana, dia mitana andraikitra lehibe. Ny G5 dia misy paika vy voadio izay manome ny fahatsapana fa tsy ho solafaka ny tananao.
Ny fakantsary roa
Izy io dia iray amin'ireo lakileny lehibe indrindra ho an'ny finday avo lenta izay ahazoanao tombony betsaka amin'izany. raha mandalo fanaraha-maso ianao. Raha ny G4 dia efa niavaka tamin'io lafiny io, dia saika hiteny isika fa ny fakantsary LG G5 no tsara indrindra amin'ny fotoana raha mandany segondra vitsy hanamboarana masontsivana isika. Ny maody Auto dia miasa tsara ihany koa, fa ny hafainganam-pandehan'ny Galaxy S7 dia mamaritra azy io ho tsara indrindra amin'ity lafiny ity.
Fa aiza izany Firavaka satro-boninahitra amin'ity finday avo lenta ity dia eo amin'ny zoro malalaka misy degre 135 amin'ny solomaso 8MP no misy azy. Hahita fomba iray hafa ianao hahitanao ny tontolo manodidina anao rehefa manomboka mandray fitiliana sy sary maro ianao. Fihetseham-po izay LG ihany no mahatonga izao fotoana izao, ka raha sary no fanananao dia manana soavaly mandresy miaraka amin'ny G5 ianao.
Raha tsy mampaninona anao ny maka maody bateria fanampiny miaraka aminao, dia hanana finday mandritra ny fotoana fohy ianao ampiasao izany raha mbola tianao ary amin'ny mitataovovonana dia atsindrohy indray mandeha rehetra ny fizakantena. Ny fahaiza-manao maoderina dia singa iray lehibe manasongadina azy, saingy midika izany fa fivoahana ho an'ny maody tsirairay tianao hampifandraisina aminy. Raha te hanome sary miovaova ny sary, ankoatry ny zoro lehibe sy ireo lafiny mandroso, ny maodelin-tsary dia manokatra safidy hafa miaraka amin'ny G5.
Nandalo ireo modules izahay, izany fahafaha-maka sary sy endrika tsara tarehy izay mametraka an'ity terminal ity amin'ny toerana tena mahaliana, fa amin'ny farany dia hampiasainay izy io hiditra ao amin'ny WhatsApp, tambajotra sosialy, fampiharana mozika, lalao video ary inona izany fitetezana ny interface. Voalaza fa ny LG G5 Izy io dia tsy manana boatin-rindrambaiko ao anaty mpandefa raha tsy atao default, na dia manana variant manana an'io endri-javatra io aza izy io.
Amin'ny fananana izany sosona manokana maivana kokoa, ny kinova UX 5.0, ary io safidy io hanadino ny iray amin'ireo vatasarihana fampiharana, ny G5 dia manome fahatsapana hafa rehefa mandefa fampiharana na mamoha ny efijery hidin-trano isika. Mampiasà sensor sensor an'ny rantsan-tànana izay miasa tsara izy ary eo an-damosina no misy azy. Raharaha ny fahazarana amin'ny fahazoana tombony betsaka amin'ity safidy ity.
Amin'ny fampisehoana miasa tsara ny G5 ary sokafy amin'ny fomba devoly ny zava-drehetra hananana ny fampiharana fakan-tsary ary haka sary havia sy havanana. Satria tsy manana lakilem-batana izy io, ny virtoaly dia ireo manampy antsika hihetsika lavorary.
Mahatsiaro ho tsy mety ny milaza an'io, fa ity bateria ity dia ambany bateria. Mitranga amin'ny V10 ihany koa izany ary somary tezitra amin'ny fananana smartphone izay ampiasainao betsaka. Saingy io fampiasana io dia midika fa amin'ny latsaky ny eritreritrao dia mety ho lany ny fizakantena. Izy io dia mipoitra avy amin'ilay zavatra nanjo ny Samsung Galaxy S6 niaraka tamina fakantsary mahatalanjona, saingy tsy maintsy apetraka mandra-pitondrantsika azy indray.
Miaraka amin'ny Android 6.0.1 Marshmallow, ny G5 dia manao asa tsara rehefa tsy miasa rehefa miankina amin'ilay maody doze izay novolavolain'i Google tamim-pahamendrehana. Fa ny efa voalaza, ny finday avo lenta dia mampiasa ny fotoana an-tsary haka sary, mamaky hafatra na milalao horonantsary amin'ny YouTube, ary eto no ahitantsika ny kileman'ity finday LG ity. Antenaina fa amin'ny G6 dia afaka miresaka zavatra hafa isika ary mitondra zavatra bebe kokoa noho ireo 2.800 mAh.
Ny LG G5 dia manana Fakan-tsary 16 MP aoriana f / 1.8 amin'ny solomaso mahazatra sy ny vava 8MP f / 2.4 amin'ny zoro malalaka. Izy io dia manana autofocus laser, OIS, flash LED ary mahay mandefa horonantsary amin'ny 2160p amin'ny 30 FPS sy 1080p / 30 FPS. Ao amin'ny fakantsary eo aloha isika dia afaka miresaka momba ny vata 8MP, f / 2.0 ary horonantsary horonantsary 1080p.
Ny sary etsy ambany dia nahena ho famahana ny 1600 × 900. Nomeko toerana misimisy kokoa ny sary zoro sy alina, mazava ho azy fa ity farany no anamafisan'ny ankamaroan'ny mpamokatra azy.
Smartphone iray izay misy Qualcomm Snapdragon 820 puce, GPU Adreno 530 ary RAM 4 GB. Amin'ny alàlan'ny default dia manana memori 32GB anatiny izy ary afaka manampy karatra microSD. Ka manana ny tsara indrindra amin'ny fotoana handefasana karazana atiny haino aman-jery rehetra.
Ny kalitaon'ny feo dia miharihary ary manana famaritana tsara miaraka ny fivoahan'ny mpandahateny eo akaikin'ny mpampitohy USB Type-C. Ny efijery, na dia tsy manana kalitaon'ny famirapiratan'ny an'ny Galaxy S7 aza dia manana zoro fijery tsara ary afaka milaza isika fa eo amin'ny haavo avo amin'ity lafiny ity. Ity fitambaran'ny feo tsara ity sy ny efijery tena tsara dia mitarika antsika hilalao karazana atiny haino aman-jery rehetra izay ivondronan'ireo lalao eo afovoany. Tokony ho fantatra fa ny Adreno 530 GPU dia midika fiakarana lehibe amin'ny kalitao sy ny fahombiazan'ny sary raha oharina amin'ny an'ny Snapdragon 810, ka ny lalao video ho hitantsika dia azo alefa tsy misy olana amin'ity finday ity.
Tezitra ny LG G5. Milaza aho fa tezitra amin'ny fahasosorana mety hateraky ny bateria na dia izany aza mandalo ny efijery adiny 3 sy sasany izyManome ny fahatsapana fa rehefa mampiasa telefaona isika dia tsy hahatratra ny andro ary amin'ny hariva dia hijery ny sary masina misy ny bateria eo amin'ny bara misy ny fiheverana izay tsy tokony ho toy izany, ary bebe kokoa amin'ny avo lenta fitaovana.
Ho an'ny ambiny, ny sainam-pirenen'i LG dia telefaona mahafinaritra ary mampiseho izany napetrak'izy ireo tao aminy ny fitiavany hanolotra zavatra hafa noho ny lalao famaranana amin'ity taona ity. Sarotra be ny misarika ny sain'ny mpanatrika rehefa manana Huawei P9 mahafinaritra isika, Galaxy S7 mahavariana, HTC 10 izay tsy ratsy velively ary finday hafa izay hitady ny fisalasalan'ny mpanjifa amin'ny ho avy ka manapa-kevitra amin'ny finday; Miresaka momba ny Xiaomi Mi 5 aho, tsy azo resena amin'ny vidiny mandra-pahatongan'ny OnePlus 3.
Ny G5 dia manana aces vitsivitsy manamboatra ny tanany ary ataon'izy ireo manokana. Ny fakantsary roa, ny endriny modular ary ny fahombiazany amin'ny lafiny rehetra toetra telo hampiarahiny ho an'ny mpampiasa maro, toa ilay nanoratra fa raiki-pitia tamin'io sary io izy tamin'ny zoro malalaka. Smartphone iray hafa tiana.
Ny fakantsary roa miaraka amin'ny zoro 135 degre
Ireo maodeliny hanampiana fiasa fanampiny amin'ny sary sy ny feo
Ny endriny metaly tsy manam-paharoa
Ny efijery "On ON" foana dia mitahiry tsy maintsy manodina ny terminal hahafantarana ny ora sy ny fampandrenesana
Kitapo batterie ambany
Mety ho nanova ny modely bateria fanampiny aho ho an'ny fizakantena lehibe kokoa
Fiatoana vetivety ao amin'ny mpijery amin'ny sary alina
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Izahay dia mamakafaka ny LG G5, ilay finday avo lenta modely misy mombamomba ny sary
Google dia hanambara ny anarana Android N afaka herinandro vitsivitsy
Ny mpanjifa Telegram tsara indrindra dia antsoina hoe Plus Messenger ary MAIMAIMPOANA !!